Global Voices teny Malagasy » Timor atsinanana: Nanoratra tamin’ny fomba fanoratana SMS ny mpanao gazety iray mba hamborahana fanaovana kolikoly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Mey 2009 14:09 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Timor Atsinanana, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Ny volana Oktobra lasa teo, nanoratra SMS momba ny fandosirany  i José Antonio Belo, maintimolalin’ny fanaovan-gazety ao Timor Atsinanana, mba hamborahana fanaovana kolikoly nandraisan’ny Ministry ny Fitsarana any an-toerana anjara. Androany, miatrika fanenjehana noho ny fanalam-baraka  ilay mpanao gazety.
Manoratra ao amin’ny gazetiboky mpilaza vaovao Tempo Semanal , namoaka ny antsipirian’ilay fifampiraharahàna teo amin’ny Minisitry ny Fitsarana Lucia Lobato sy ny mpanao afera mpiara-miasa maro amin’ilay fanamboarana ny rindrin'ny fonja ary fitaovana toy ny akanjon’ny mpiambina fonja. Lasan’ny vadin’ilay minisitra ny fifanarahana. Maherin’ny 1 tapitrisa $ ny tombam-bidin’izany fifanarahana izany.
Ity manaraka ity ny SMS nalefa ho an’ny findain’ilay minisitra ny 7 Aogositra 2008 , tamin’ny 12:25 avy tamin’izany JS izany:
“Ranabavy, vao avy namarana ny drafitra ho an’ny tetikasa fifanarahana aho dia hitako fa ampy tsara ny vidiny nolazaiko anareo androany satria mahatratra 10 metatra ny haavon’io tamboho io ary matevina be tsy nampiasàna ‘blocks’ fa famenoana simenitra (simenitra, vato ary “double couche d’acier”) manana kalitao iraisam-pirenena fotsiny. Mitovy amin’ny an’ny ambasadin’ny USA ilay izy fa izany hoe ny azy 3 metatra fotsiny ny haavony ary tsy dia matevina.”
Tamin’ny 12:30:10, namaly ny minisitra:
“Tsara izany, hojereko rehefa kelikely.”
Toa fifandefasana hafatra ara-dalàna io nefa tamin’ny 25 Aogositra 2008 vao nandefa filazana amin’ny fananganana tamboho vaovao ho an'ny fonja ny Minisitry ny Famatsiam-bola.
Nametraka fitoriana ny Minisitra Lobato fa tsy najaina ny fiainany manokana . Niteny ilay mpanao gazety fa nanoratra momba ny nataon’ilay minisitra izy amin’ny maha-olom-panjakana ambony azy, fa tsy ny amin'ny asa maha-olon-tsotra azy. Nanapa-kevitra ny fitsarana fa hohenjehina amina heloka fanalam-baraka ilay mpanao gazety. Raha voaporofo ho meloka izy, mety hijanona enin-taona an-tranomaizina i Belo.
Naneho fankaherezana an’ilay mpanao gazety ny vondrona sy olona maro. Nanome rohy ny Pacific Freedom Forum mankany amina lahatsoratry ny Cafe Pacific  izay manamafy fa hitera- bokatra hanakorontana  ny fahalalahana hiteny any Timor Atsinanana sy ny sehatry ny haino aman-jery vao misondrotra” io fanenjehana. Manampy izany ireo vondrona:
Ho an’ny governemantan’ny Timor Atsinanana, ny fiafenana ao ambadiky ny lalàm-panjanahantany nampiasain’ny indoneziana mba hanoherana sy hampatahotra ireo ezaka fandrosoana mankany amin’ny demokrasia dia midika tsy firaharahiana ny ràn’ireo olom-pireneny latsaka tamin’ny fanohanana ny fahalalahana.
Sarin’ilay “magazine” Tempo Semanal
Tsy manana afa-tsy fahitalavi-pirenena sy foibe fampielzam-peo vitsivitsy fotsiny ny “seahtry ny haino aman-jery vao misondrotra”. 0,1 isan-jaton’ny mponina fotsiny no manana fahafahana mampiasa aterineto  izay mahatonga ny gazetiboky toy an’ny Tempo Semanal (gazetin’i Belo) ho loharanom-baovao voalohany any an-toerana.
La’o Hamutuk, fikambam-piaraha-monina sivily iray, dia niteny  fa
nanome sary ratsy afaka mamono ny fahafahana eo amin’ny fanaovan-gazety mahaleotena sy tsy miankina ny fiampangàna an’ilay mpanao gazety. Hatahotra ny famoahana vaovao mazava sy an-tsipiriany ny haino aman-jery raha mahalala fa hiteraka fandrahonana ho an-dry zareo izany.
Fanirian'ilay vondrona ny tokony hanadihadiana momba ny kolikolin’ny Minisitry ny governemanta toy izay hanasazy ilay mpanao gazety:
Porofon’ny tokony ho nampiasain’ny Filohan'ny fampanoavàna hanokafana fanadihadiana momba ny mety hisian’ny kolikoly tao amin’ny ministeran’ny fitsarana ny vaovao navoakan’ny Tempo Semanal. Nefa raha ny marina dia manadihady momba an’i Jose Belo ny Mpampanoa lalàna, izay ampangainy ho nanely tsaho. Toy ny fanamelohana ny fanaovan-gazety malalaka, izay manome vaovao marina sy miteny ny zava-misy ho an’ny vahoaka, no fahitàn’I La’o Hamutuk ity fanoherana ity.
Diso fanantenana  i Carmel Budiardjo ao amin’ny TAPOL, gazety momba ny zon’olombelona, fa ilay lalàna nampiasain’ny Indoneziana hanafoanana ny fahalalana manao gazety tao amin’ny firenena no ampiasaina amin’ny Belo ankehitriny, mpiaro mahafatra-po ny fahalalahana manao gazety::
Fantatray tsara ny herim-pon’I Jose Belo nandritra ny roapolo taona mahery nisian’ny fanjanahantany Indoneziana ary tena kiriko izahay hoe lalàna nampidirin’ny Indoneziana ve no anoherana ny asan’ny fanaovan-gazety ara-dalàna ao amina firenena izay milaza fa mandàla ny demokrasia. Tokony hotsoahan’ny Minisitry ny fitsarana Lucia Lobato ny fitoriana napetrany mba hanehoany fa miombona amin’ny fahalalahana manao gazety izy. Tsytokony hatahotra fitoriana mety hitondra azy any an-tranomaizina ny mpanao gazety ao Timor satria manao ny tokony ataon’ny mpanao gazety ry zareo rehefa mahita porofo momba ny mety hisiana kolikoly ataona mpikambana ao amin’ny governemanta.
Misy ny fanangonan-tsonia an-tranonkala  mangataka amin’ny governemantan’ny Timor Atsinanana mba hanatsahatra ny fanenjehana an’i Belo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/02/1987/
 SMS momba ny fandosirany: http://whatismatt.com/are-you-being-observed/
 fanenjehana noho ny fanalam-baraka : https://globalvoicesonline.org/2009/03/10/east-timor-sms-text-used-as-corruption-evidence/
 7 Aogositra 2008: http://www.temposemanaltimor.blogspot.com/2008/10/tempo-semanal-edition-108-sms-texts.html
 tsy najaina ny fiainany manokana: http://www.etan.org/news/2009/01tempo.htm
 bokatra hanakorontana: http://pacificfreedomforum.blogspot.com/2009/03/pacific-freedom-forum-petitions-against.html
 fahafahana mampiasa aterineto: http://www.wsws.org/articles/2009/mar2009/timo-m06.shtml
 Diso fanantenana: http://tapol.gn.apc.org/statements/st090301.html
 fanangonan-tsonia an-tranonkala: http://www.gopetition.com/petitions/jose-belo.html